တရုတ်လယ်ထွန်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးအမှတ် ၃ ချက်ချိတ်ထားသည့်လည်ပတ်မှု Zhicheng
လယ်ထွန်စက်များအတွက်အကောင်းဆုံး3မှတ်ချိတ်ဆွဲ pto rotary ထွန်စက်
Rotary tiller သည်ထွန်ယက်ခြင်းနှင့်ထွန်ယက်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးမြောက်ရန်လယ်ထွန်စက်နှင့်လိုက်ဖက်သည့်စက်ယန္တရားဖြစ်သည်။ စိုက်ပျိုးမြေပြီးနောက်မြေဆီလွှာကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့်မြေမျက်နှာပြင်ပြန့်ကျဲခြင်းကြောင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၎င်းသည်မြေကြီးမျက်နှာပြင်အောက်ရှိအမှိုက်များကိုဖြတ်တောက်ပစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မျိုးစေ့ချော၏လည်ပတ်မှုအတွက်အဆင်ပြေပြီးနောက်ပိုင်းမျိုးစေ့အတွက်ကောင်းမွန်သောမျိုးစေ့ခင်းဖြစ်သည်။
သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါ 0086 18764704890
ဂီယာချစ်ခြင်း ဂီယာချစ်ခြင်း ဂီယာချစ်ခြင်း ဂီယာချစ်ခြင်း ဂီယာချစ်ခြင်း ဂီယာချစ်ခြင်း ဂီယာချစ်ခြင်း ဂီယာချစ်ခြင်း ဂီယာချစ်ခြင်း
မြန်နှုန်း r / min အလှည့်
သုံးမှတ်ဆိုင်းငံ့ထားချစ်ခြင်း သုံးမှတ်ဆိုင်းငံ့ထားချစ်ခြင်း သုံးမှတ်ဆိုင်းငံ့ထားချစ်ခြင်း သုံးမှတ်ဆိုင်းငံ့ထားချစ်ခြင်း သုံးမှတ်ဆိုင်းငံ့ထားချစ်ခြင်း သုံးမှတ်ဆိုင်းငံ့ထားချစ်ခြင်း သုံးမှတ်ဆိုင်းငံ့ထားချစ်ခြင်း သုံးမှတ်ဆိုင်းငံ့ထားချစ်ခြင်း
မြေဆီလွှာအစိုဓာတ်ကိုသိုလှောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပေါင်းပင်အချို့ကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ အပင်ရောဂါများနှင့်ပိုးမွှားပိုးမွှားများလျှော့ချခြင်း၊ မြေညီမျှခြင်းနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဆင့်အတန်းမြင့်မားခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ စက်မှုစစ်ဆင်ရေး။
1. ဂီယာ: ကွင်းဆက်မောင်းနှင်။
၃။ ဆိုင်းထိန်းစနစ်ပုံသဏ္laserာန်ကိုလေဆာဖြတ်ခြင်း၊ ပုံသွင်းခြင်းတည်နေရာဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
4. Chain device ကိုလက်ချိန်ညှိ။
5. ဘေးထွက်ကာကွယ်မှုပြားများကိုနောက်ဘက် deflecton သို့ထည့်သည်။
၇။ ဓါးသွားများသည်အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်အထူးစမ်းသပ်မှုအောက်တွင်ရှိသည်
အကြီးစားတာဝန် rotary လယ်သမား
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်ချိန်ညှိနိုင်သောနောက်ဘက်ခတ်သည်အပြင်ဘက်သို့ချောချောမွေ့မွေ့ချောမွေ့စေခြင်း ~ အပေါ်ယံမြေဆီလွှာကိုပိုမိုနှံ့နှံ့စပ်စပ် tiling အတွက်အနားအပိုတစ်ခုအပိုခိုင်မာသည့်ဓါးများ ၆ နက်ရှိုင်းသောထိန်းချုပ်မှုအတွက်အမြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည့်စကိတ်များ၊
၁။ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာများကို ၁၀ နှစ်ကျော်မြှုပ်နှံပြီးပြီ။
၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်လလျှင် rotary tiller ၂၀၀၀ ကျော်ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
ရှေ့သို့ ce နှင့်အတူလယ်ထွန်စက် finish ကို mower pto Point ချိတ်ဆက်
နောက်တစ်ခု: သုံးမှတ်ထွန်စက် /34567ပေရောင်းရန် rotary ထွန်စက်
3 ပွိုင့်ချိတ်ချိတ် Rotary Tiller
3 ပွိုင့်ထုပ် Tiller
ရောင်းရန်3Point Tiller
လယ်ထွန်စက်များအတွက်3Point Tillers
ရုံးလိပ်စာ - Room1608၊ Jintai Building, Dongfeng အနောက်လမ်းနှင့် Changsong လမ်းဆုံအနောက်ဘက်ထောင့်၊ Weicheng ခရိုင်၊ Weifang City, Shandong ပြည်နယ်